तपाइमा यस्ता रोगका कारण यौन इच्छा नभएको हुनसक्छ ! - AJAMBARI
५ जेठ,२०७५ 207 0
यौनको कुरा सबैको लागि चर्चाको विषय हुन्छ तर अझै पनि हाम्रो समाजमा यस बारेमा खुलेर कुरा गरिदैन । हामीलाई लाग्छ यौन छाडा कुरा हो । यौनको विषयमा कुरा गर्नु भनेको ‘लाज पचाउनु’ नै हो । यौन भनेको ‘गर्नैै नहुने’ हो । आखिर हाम्रो मनमा यौनको कुरा किन यसरी धमिलियो ? के साँच्चै यौन ‘छाडा’ कुरा हो ? यसको विषयमा कुरा गर्नै हुँदैन ?
संन्यासपछि ब्राजिलले चौथोपटक विश्वकप जित्‍न २४ वर्ष कुर्नुपर्‍यो
रणवीर कपुरको फिल्म ‘सञ्जु’ चर्चामा
४ जेठ,२०७५0215
३ चैत्र,२०७४0335
४ जेठ,२०७५0191